मेहनेतले पाएको सफलताले मुलुककै ठुलो बंगुर फर्म, बार्षिक ७ करोडको कारोबार ! – Khabarhouse
मेहनेतले पाएको सफलताले मुलुककै ठुलो बंगुर फर्म, बार्षिक ७ करोडको कारोबार !
Khabar house | २८ माघ २०७६, मंगलवार १७:०१ | Comments
टीकाराम उप्रेती, झापा । घरमा साहुको लर्को लाग्न थाल्यो । बिहान उज्यालो भएदेखि साहुको डरले राती उठेर जंगल तिर जान्थेँ। दिनभरी जंगलमा नै बस्थेँ । साँझ सबै सुतेपछि अध्यारोमा घर फर्कन्थेँ। बाटोमा नयाँ मानिस देख्दा पनि मलाई नै खोज्दै आएको होला भनेर डर लाग्थ्यो । नेपालमा केही काम पाइनँ । मेरो सबै विकल्प सकिएर पछि ऋण गरेर कोरिया जाने योजना बनाएँ ।
यही क्रममा अढाई लाख रुपियाँ ऋण गरेँ । यो सबै पैसा दलालले खाई दियो । विदेश जाने सपना बन्द भयो। मेरो विदेशको बाटो विग्रीयो भन्ने सुनेपछि साहुले पैसा उठाउन दबाब दिन दैनिक आउन थालेँ। त्यसपछि म भाग्न थालेँ । वरपरका छिमेकी समेत यसले पैसा माग्छ भनेर तर्केर हिड्न थालेँ । कसैले एक सय रुपियाँ पनि पत्याउन छाडे । म विक्रम सम्वत् २०६१ सालमा यस्तै हालतमा पुगेको थिएँ ।
यसैबीचमा श्रीमतीले माइतमा दिएको पाँचसय रुपैयाँ खर्च बचाएर एउटा बंगुरको पाठो किनेर रुखको फेदमा डोरी बाँ’धेर मेरो पहिलो बंगुर पालनको पाइला अघि बढेको थियो।यो २०६१ सालबाट सुरु भएको बंगुर पालन यात्रा अहिले सफलताले चुमेको छ। झापाको कमल गाउँपालिका ४ सितापुरी निवासी बर्ष ४५ का संजिव कुलुङ राई अहिले मुलुककै सफल बंगुर पालक किसानको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ ।
उहाँको बंगुर फर्म अहिले मुलुक कै सबै भन्दा ठुलो मध्येको एक भएको छ । एउटा काममा असफल भएको मानिस अर्को व्यवसायमा कसरी सफलता प्राप्त गर्नसक्दो रहे छ भन्ने राम्रो उदाहरणको पात्र बन्नु भएको सजिव कुलुङ राइ । उहाँले २०६३/०६४ सालमा कुलुङ बंगुर फर्म प्रालि मार्फत व्यवसायीक रुपमा बंगुर पालन ब्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो । बंगुर पालन व्यवसाय सुरु गरेको १२ बर्षको अन्तरालमा आफुले नसोचेको सफलता हात परेको बताउनु हुन्छ ।
मेरो अरु बिकल्प नभएपछि लगातार यही व्यवसायमा लगेँ । कडा मेहनेत गरेर लागेपछि व्यवसायले समेत मलाइ साथ दियो। अहिले मेरो बंगुर फर्ममा साना ठुला गरि कुल ८ सयवटा बंगुर रहेका छन् उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँको कुलुङ बंगुर फर्मले मुख्य गरेर उन्नत जातको बंगुरको पाठापाठी उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ बार्षिक रुपमा सातदेखि आठ हजारको हाराहारीमा पाठापाठी उत्पादन गरि बिक्री बितरण गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
कुलुङ बंगुर फर्ममा बार्षिक रुपमा ७ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । त्यस्तै बार्षिक रुपमा ७० देखि ८० वटा बंगुर मासुको लागि बिक्री हुने गरेका छन् । यस्तै मासिक रुपमा ६ सयबढी पाठापाठी उत्पादन हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन कुलुङले उन्नत जातको बंगुर ताजा बीर्य संकलन गरि कृत्रिम गर्भधारण समेत गराउदै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नै फर्म मार्फत अत्याधुनिक ल्याबबाट बोर जातको बंगुरको ताजा वीर्य संकलन तथा भण्डार गरि कृतिम गर्भाधारण (एआई) समेत गराउदै आउनु भएको छ।
उहाँले बार्षिक रुपमा तीन हजार ६ सय माउलाई एआई गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। फर्ममा चार करोड भन्दा बढीको भौतिक संरचना नै निर्माण गरिएको छ। एक समय नेपालमा कुनै काम नपाएर विदेशको अन्तिम बिकल्प देख्नु भएका कुलुङ्ले अहिले आफ्नै फर्ममा २० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिन सफल हुनुभएको छ । कुनै अवस्थमा एक सय रुपैयाँ ऋण कसैले नपत्याएका कुलुङ्को र्फममा अहिले लगानी गर्न ठुला ठुला बैंक पैसा दिदैं धाउन थालेका छन् ।
अहिले कुलुङ कृषि बिकास बैंकको सबैभन्दा असल ऋणीको रुपमा पुरस्कृत समेत हुनुभएको छ। कडा मेहनेतबाट चाँडै सफल बन्नु भएका कुलुङले उत्पादन गरेका बंगुरका पाठापाठीले नेपालको माग धान्न नसकेको बताउनु हुन्छ। माग अत्यधिक छ। अग्रिम पेश्कि छोड्नेलेमात्र पाउने गरेका छन् । उहाँ अहिले सबै बेरोजगारका लागि गतिलो उदाहरण बन्नुभएको छ ।